အကြင်​နာ​ပေးခြင်​း၏ ကျန်​းမာ​ရေးအတွက်​​ကောင်​း​သောအချက်​များ - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 16:53 August 16, 2016
1. အကြင်​နာ​ပေးခြင်​းက သင်​၏သွားကျန်​းမာ​ရေး​ကို​ကောင်​းမွန်​​စေပါတယ်​
သု​တေသနပြုလုပ်​ချက်​တစ်​ခုအရဆိုလျှင်​ အကြင်​နာ​ပေးတဲ့အခါ ထွက်​လာတဲ့တံ​ထွေးဟာ သင်​့ရဲ့သွားကျန်​းမာ​ရေးကို အ​ထောက်​အကူပြုတယ်​လို့​ပြောပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင်​့ အကြင်​နာ​ပေးခြင်​းဟာ သင်​့ရဲ့သွားဖုံးကျန်​းမာ​ရေးကို အ​ထောက်​အကူပြုပြီး သွားဆရာဝန်​ဆီ ခဏခဏမသွားရ​အောင်​ စွမ်​း​ဆောင်​​ပေးနိုင်​တယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။
2. အကြင်​နာ​ပေးခြင်​းက ဘဝမှာ အသက်​ရှည်​ရှည်​နဲ့​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​​နေ​စေနိုင်​ပါတယ်​။
ကိုယ်​့ချစ်​ရတဲ့သူကို မြတ်​မြတ်​နိုးနိုးတစ်​ခါနမ်​းတိုင်​း အသက်​ ငါးနှစ်​တိုးတယ်​လို့ သု​တေသနပြုလုပ်​ချက်​အရ​တွေ့ရှိရပါတယ်​​နော်​။
3. အကြင်​နာ​ပေးခြင်​းက ၀ိတ်​ကိုကျ​စေပါတယ်​။
သင်​သိပါသလား။ သင်​သိပ်​ချစ်​တဲ့သူကို ဖွဖွ​လေးတစ်​ခါနမ်​းရင်​​တောင်​ ၆ ကယ်​လိုရီက​နေ ၁၂ကယ်​လိုရီအထိ​လောင်​ကျွမ်​းတတ်​တယ်​ ဆိုတာ။ ဒီထက်​့များ နည်​းနည်​း အရှိန်​ပြင်​းမယ်​ဆိုရင်​​တော့၊ ၀ိတ်​ပိုကျတာ​ပေါ့လို့။
4. အကြင်​နာ​ပေးခြင်​းက ကိုယ်​့ကိုကိုယ်​ယုံကြည်​မှုတိုး​စေပါတယ်​။
ကိုယ်​ကအချစ်​ခံရတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ ကိုယ်​ချစ်​တဲ့သူကို အကြင်​နာ​ပေးတဲ့​နေရာမှာ ကိုယ်​့ကိုကိုယ်​ အထင်​ကြီး​လေးစားလာပြီး ယုံကြည်​မှုလည်​း တဖြည်​းဖြည်​းတိုးလာတယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင်​့ စိတ်​ဓာတ်​ကျတာ စိတ်​ပင်​ပန်​းတာဖြစ်​​နေရင်​​တော့ ချစ်​တဲ့သူကို အာဘွားကြီးကြီးသာ​ပေးလိုက်​ပါ။ ဘယ်​ကမှန်​းမသိတဲ့ခွန်​အား​တွေ ရလာပါလိမ်​့မယ်​။
5. အကြင်​နာ​ပေးတာက သင်​့ရဲ့ နှလုံးအတွက်​​ကောင်​းပါတယ်​။
​လေ့လာ​တွေ့ရှိချက်​အရ အကြင်​နာတစ်​ခါ​ပေးရင်​ နှလုံးခုန်​နှုန်​းမြန်​လာပြီး ​သွေးလည်​ပတ်​မှုကိုမြင်​့တက်​​စေကာ နှလုံးကျန်းမာ​ရေးအတွက်​​ကောင်​းပါ​စေတယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။ နှလုံးခုန်​နှုန်​းအမြန်​ဟာ လမ်​း​အမြန်​လျှောက်တာ စက်​ဘီးစီးအားကစားလုပ်​နှုန်​းနဲ့သွားညီတယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။
6. အကြင်​နာ​ပေးတာက စိတ်​ဖိစီးမှု​ပြေ​ပျောက်​​စေတယ်​။
အထက်​က​ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ချစ်​သူနဲ့ အကြင်​နာ​ပေးတဲ့အချိန်​မှာ အရာအားလုံး​မေ့​ပျောက်​ပြီး စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေ​ပြေ​ပျောက်​တယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။
7. အကြင်​နာ​ပေးတာက နာကျင်​မှုကို​လျော့ကျ​စေတယ်​
​ခေါင်​းမူး​နေပါသလား၊ ​ခေါင်​းကိုက်​​နေပါသလား၊ ချစ်​ရသူရဲ့မျက်​နှာကို တစိမ်​စိမ်​့ကြည်​့ပြီး​တော့သာ အကြင်​နာ​လေး​ပေး​လိုက်​ပါ။ ဒါဟာ ​သောက်​​ဆေး​တွေထက်​​တောင်​ပိုအစွမ်​းထက်​ပါတယ်​။
8. အကြင်​နာ​ပေးတာက ကိုယ်​့ကိုကိုယ်​ ငယ်​ပြီး နုပျိုတယ်​လို့ထင်​​စေနိုင်​။
ချစ်​ရသူနဲ့ အကြင်​နာ​ပေးတိုင်​းမှာ ကိုယ်​ဟာ ဘယ်​​လောက်​ပဲအသက်ကြီး​နေပါ​စေ၊ ဖိုးဖိုးဖွားဖွား​တွေပဲဖြစ်​​နေပါ​စေ၊ ဒီအခိုက်​အတန်​့​လေးက​တော့ အမြဲတမ်​းသင်​့ကို ပြန်​ငယ်​သွားတယ်​လို်​ခံစားရ​စေမှာပါ။